Ny famoloana. - Ambohibary, vohitra soa !
Ny famoloana dia toerana iray manana ny lanjany, tsy afaka misaraka amin'ny fararano. Natao hanaovana vary izy amin'ny ankapobeny : hikapohana ny fehezam-bary, hametrahana ny atonta, hanahazana ny vary akotry. Izy io dia mirefy manodidina ny 100 m mivadi-droa eo, ka misy 2 karazana ny famoloana :
Ny famoloana voalalotra tany mena mifangaro tain'omby,Ny famoloana vita lalotra simenitra.
Amin'ny akapobeny dia misy vato roa, manana haavo eo amin'ny 50 sm, ary manana velarana sahabo eo amin'ny 90 sm mivadi-droa, ka afovoan'ny famoloana no misy azireo. Izireo dia natokana hikapohana ny vary, ny tena marina kokoa dia hoe ny fehezam-bary no akapoka amin'ireo vato ireo ary miraraka avy hatrany ny vary.
Ny vato iray dia afaka ikarimbonan'ny olona roa miaraka, koa dia manafaingana ny asa izany, satria dia olona efatra be izao izany no indray mively vary amin'izany.
Marina tokoa fa ny vary no tena lahasa sahanin'ny famoloana nefa rehefa tsy fotoanan'ny fanaovam-bary dia afaka miakatra eo amin'ny famoloana avokoa ny tsaramaso, ny mangahazo, ny katsaka.
Mitana ny toerana goavana eo an'ivon'ny fiarahamonina tokoa noho izany ny famoloana. Tsy ny isan-tokatrano anefa dia manana famoloana fa dia fianakaviana vitsivitsy ihany no manana fahefana amin'izany. Mitahiry ny soatoavina ny famoloana satria dia toerana iray isehoan'ny fifankatiavana sy ny fihavanana izay mbola voatahiry any ambanivotra izy. Ireo manana dia tsy misalasala fa dia mampindrana izany amin'ireo mpiara monina. Teny ierana fotsiny dia vita, saingy miankina kosa amin'ny fampiasan'ny tompony sy ny hafa izany. Raha amin'ny fotoanan'ny fanaovam-bary tokoa manko dia misy karazan'atontam-bary maromaro eo amin'ny manodidina ny famoloana miandry ny andro hikapohana azy.
Amin'ny fararano dia tena toy irony toerana fanaovam-pety irony ny famoloana : hifamezivezena, hitafatafana, hiasana.
# Posté le mercredi 09 mars 2016 02:52
Modifié le mercredi 09 mars 2016 07:49